Manneen waliinii sagantaa 20/80 karaa seeraan alaatiin gurguramaa jiraachuun dhagahame - ዜና ከምንጩ
Manneen waliinii sagantaa 20/80 karaa seeraan alaatiin gurguramaa jiraachuun dhagahame
Qonnaan bultoonni maqaa tajaajila misoomaaf jedhuun lafti isaanii irraa fudhatamee turee fi manneen waliinii sagantaa 20/80 isaan qaqqabe, mana yoo argatanis maallaqa gahaa ijaarsicha xumursiisuuf (finishing) isaan barbaachisu waan hinqabneef manneen kana karaa seeraan-alaatiin gurguraa jiraachuu namoonni yaada kennan Addis Maaledaatti himaniiru.
Namoota yaada kennan keessaa Hayile Mikaa’el Abboneeh akka jedhanitti, qonnaan bultoonni qabata misooma diriirsuutiin lafti isaanii mootummaadhaan irraa fudhatame, turtii hedduu booda manni yoo isaan qaqqabes sababa maallaqa hinqabneef manicha xumuranii itti galuu dadhabuu isaaniitiin manneen isaanii karaa seeraan-alaatiin gurguraa jiraachuu ibsan.
Bu’ura seera seera Koorporeeshiinii Misooma Manneeniitiin mana gurguruun hindanda’amu kan jedhan namni kun, hata’u malee qonnaan bultoonni mana isaanii gurguraa jiraachuu, “hiryaan kiyyas gurgurateera” jechuun fakkeenya eeraniiru.
Gurguruun hindanda’amu jedhama malee wayita danda’amu argineerra kan jedhan Hayile Mikaa’el, namoonni hedduun “maallaqa kiyya kamiinan manicha guutee itti galuu danda’a?” jechuudhaan gatii baay’ee gadi-bu’aa ta’etti gurguraa jiru jedhaniiru.
“Marii jalqaba irratti tureen erga manichi nuuf kennamee booda wantoonni guutamuu qaban mootummaadhaan akka guutaman karaa koreewwaniitiin waadaan nuuf seenamee ture” kan jedhan namni kun, waadaan seename garuu raawwatamaa hinjiru jedhaniiru.
Manni nu qaqqabe tajaajila eleektiriikii, kan bishaanii fi daandii hinqabu; baasii isaa mootummaatu danda’a. hojiiwwan hafan xumursiisuuf immoo akkaataa ogummaa keessaniitiin gurmaa’aa nuun jechaa turanii, erga furtuu nuuf kennanii booda as garagalaniituma illee nu hinilaalle jedhan obbo Hayile Mikaa’el.
Namni Gabre Masqal Abboneeh jedhamn kan biraa gama isaaniitiin, misoomaaf jedhamee kan nama tokkoo qofti lafti hanga karee meetira kuma 20 jalaa fudhatameera kan jedhan yoo ta’u, manni isaaniif kennamu sirriitti xumuramee guutamuudhaan akka kennamuuf wayita sanatti yoo itti himames, amma garuu wanti ta’aa jiru faallaa isaa ti jedhan.
Manni nuuf kenname kan guutame miti kan jedhan Gabre Masqal, manicha guutanii itti galuudhaaf hanga birrii kuma 200 waan gaafatuuf, qonnaan bultoonni kana guutanii itti galuuf humna waan hinqabneef manicha gurguruuf dirqamaa jiraachuu isaanii akka hubatan dubbatan.
Dhimmicha ilaalchisuudhaan namoota bakka buufaman dhiyeenya kana gaafataniis, deebii “mootummaan furmaata ni kenna” jedhu yoo argatanis, hanga gabaasni kun qindaa’etti furmaata akka hinargatin dubbataniiru.
Manicha guutanii kennuudhaan cinatti; suuqonni ittiin jiraachuuf ta’an akka kennamanu waadaa nuuf seenanii turan kan jedhan obbo Gabre Masqal, waadaan kunis hinkabajamne jedhaniiru.
Itti dabaluunis, qonnaan bultoonni hojii qonnaatiin jiraataa turuu eeranii, lafa isaa jala fudhatame bakka buusuuf bu’ura waadaa seenameetiin manni guutame kennamuufii qaba malee birrii kuma 200 eessaa fideetu manicha xumuruu danda’a? gaaffii jedhu gaafataniiru.
Maqaan isaanii akka hinibsamne kan gaafatan namni biraa gama isaaniitiin, “ilmaan qonnaan bulaa waan taaneef manicha guuttannee itti galuu hindandeenye, kanaaf mootummaan bu’ura waadaa nuuf seeneen manicha xumuree nuuf kennuu qaba” jedhaniiru.
Dabalaniis, namoonni hanga yoonaatti mana hinargatin jiraachuu eeranii, qonnaan bultoonni manni isaan qaqqabeera jedhaman immoo baasiin manicha guutuuf barbaachisu hedduu waan ta’eef itti galuu akka hindandeenye ibsan.
Addis Maaledaan gaaffii namoota komee dhiyeessanii kana qabattee Koorporeeshiinii Misooma Manneenii magaalaa Finfinneetti daarikteera itti aanaa ijaarsaa Toomaas Dabalee wajjin kan turte yoo ta’u, manicha gurguruun akka hindanda’amnee fi, rakkinichi furamuu akka danda’u haala armaan gadiitiin ibsan.
Haala yeroo ammaa jiruun walqabatee hojiiwwan akka duubatti harkifatan kan ibsan Toomaas, bu’ura humna maallaqa qabnuutiin hojiiwwan bu’uraa xumurree manneen kennine ni jiru, kan hafan immoo xumurree ni kennina jedhan.
Walqabsiisuunis, waadaa keenya hindiignu, dirqama keenyas ni baana, garuu namoonni komii dhiyeessan haala yeroo ammaa jiru yaada keessa nuuf galchuu qabu jedhaniiru.
Magaalattii keessa gamoowwan kuma lamaa fi 222 oltu jira kan jedhan Toomaas, kana hunda yeroo tokkotti xumuranii kennuun waan dadhabameef malee mootummaan hinhojjedhu hinjenne jedhaniiru.
Toomaas itti dabaluun, suuqonni manneen sagantaa 20/80 jiraattotaaf kennuuf amma qophii miti, wayita qophaa’anutti garuu kan kennaman ta’u jedhanii, kana irraa kan hafe namni komii qabu kamiyyuu waajjira dhufee gaaffii isaa yoo dhiyeeffate deebii ni kennina jechuun ibsaniiru.
Total views : 7512517